အသက် ၃၀ အရွယ်အမျိုးသမီး - ယောက်ျားနှင့်တစ်ယောက်တည်းမအော်နိုင်၊ တစ် ဦး တည်းသာအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်း။ - Porn တွင်သင်၏ ဦး နှောက်
အမျိုးသမီးအသက်အရွယ် 30s - သာတစ်ဦးတည်း, ယောက်ျားနှင့်အတူ orgasm နိုင်ခြင်း - အောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ယခုအချိန်အထိ!
ရုံယခုအချိန်အထိငါ့အတိုးတက်မှုဝေမျှဖို့အားဖြင့်ကျဆင်းနေ။ ငါအတိအကျဖြစ်ရန်, 247 ရက်အကြာဇန်နဝါရီလအတွင်း nofap စတင်ခဲ့သည်။ အကြောင်းပြချက်ငါကြိုက်သလောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သော်လည်းသူတို့လုပ်သမျှ၊ မည်မျှပင်ကြိုးစားခဲ့ပါစေမိတ်ဖက် (မည်သည့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်) နှင့်မှအော်ဂဇင်မပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ငါအသက် ၁၉ နှစ်တုန်းကငါ့ဘဝမှာတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေတာမျိုးတစ်ခါမှမလုပ်ဖူးဘူး၊ ငါဟာ PIV လိင်ဆက်ဆံမှုမှသာလျှင်အော်ဂဇင်ကိုလေ့ကျင့်လေ့ရှိတယ် (မိန်းမတော်တော်များများဟာရာသီဥတုကိုလှုံ့ဆော်ပေးတယ်၊
အသက် ၂၀ ပြည့်တဲ့အခါငါအော်ဂဇင်ကိုအတော်လေးအရသာရှိခဲ့တယ်။ တစ်ကိုယ်ရေတစ်ယောက်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပျံ့နှံ့နေတဲ့ယုန် [တုန်ခါသူ] - ကြီးမားတဲ့အမှား၊ PIV O ကိုဘယ်တော့မှမတွေ့ရဘူး၊ လာမယ့် ၁၄ နှစ်အတွင်းမှာကျွန်တော်ဟာယုန်ကနေထွက်လာနိုင်ပြီးစိတ်ကူးယဉ်ဆန်တဲ့ (သို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုကြည့်ရှုခြင်း) လုပ်နိုင်မှာပါ။
လွန်ခဲ့သော ၆ နှစ်ကယုန်သည်ကျွန်ုပ်၏လက်ကိုမည်သို့အသုံးပြုရမည်ကိုလေ့လာခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးတွင် O. အားညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုရန်သို့မဟုတ်ကြည့်ရှုရန်လိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အတိအကျတိတိကျကျဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်၊ နှင့် စိတ်ကူးယဉ်ထားတာဒါကြောင့်ငါမရှိခဲ့ဘူး။ ငါနဲ့လည်းငါ့ကြင်ဖော်နဲ့ကိုယ်ထိလက်ရောက်မနှောက်ယှက်နိုင်တော့ဘူး ငါထင်တာကတော့ငါတို့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတူတကွအတူနေပြီးမီးပွားတွေပျောက်ကွယ်သွားပြီလေ။ ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ဒါကငါ့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်နဲ့လက်တွေ့မကျတဲ့စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ဆန်အပျော်အပါးကိုအသိအမှတ်ပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲ။
ဒါကြောင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျေနပ်ရောင့်ရဲနိုင်ရုံသာမကစိတ်ကျေနပ်မှုကိုလည်းကျေနပ်စွာရပြီး nofap ကိုကြိုးစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုဖြတ်ပြီးတစ်ကြိမ်ကြည့်ပြီးမကြည့်ခဲ့ဘူး၊ ဒါကတစ်လကိုအကြိမ်အနည်းငယ်ကြည့်ပြီးစွဲလမ်းခဲ့တဲ့အတွက်ပြaနာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါကတစ်လအကြိမ်အနည်းငယ်ကြည့်ရုံမက၊ ငါသည်လည်းငါအောင်မြင်စွာအောင်မြင်ခဲ့ပြီးသော MO ကိုစွန့်ခွာရန်ကြိုးစားခဲ့သည်၊ ရှည်လျားသောလမ်းများရှိခြင်းဖြစ်သော်လည်းထို့နောက်ငါနှင့်ဤနေရာတွင်ထူးဆန်းသည့်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ကြာလိမ့်မည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့လက်တွေ့မဆန်သောသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများနှင့် ပတ်သက်၍ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဤအတွေးများသည်ကျွန်ုပ်၏နှိုးဆွခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကို ၁၄ နှစ်ကြာအောင်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုကိုရှုပ်ထွေးစေသောအတွေးများဖြစ်သည်။
ထွက် sorting လိုအပ်ကြောင်း2ကိစ္စများရှိပါသည် ဖြစ်. ,
ကိုယ်ထိလက်ရောက် - ငါ၌မိန်းမသေခြင်းချုပ်နှောင်ထားခဲ့သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်၏အခြေအနေကိုဖိအား၊ ဦး တည်ချက်နှင့်အမြန်နှုန်းဖြင့်ပွတ်သပ်လျှင်အို။ ဒါကြောင့်အခြားသူတစ် ဦး တစ်ယောက်တည်းမှမဟုတ်ဘဲအခြားမည်သည့်ထိတွေ့မှုမျိုးကိုမဆိုငါလုံးဝရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ္တဇဆန်ဆန်ဖြစ်လာတယ်။
စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ - ငါမှာ PIED နှစ်ခုစလုံးရဲ့အမျိုးသမီးဗားရှင်းတွေရှိတယ် နှင့် DE ။ ငါသာကိုယ်ထိလက်ရောက်နှိုးဆော်ခြင်းဖြစ်လာသို့မဟုတ်ငါစိတ်ကူးယဉ်ပွညျ၌ပယ်ခဲ့သို့မဟုတ် porn ကိုကြည့်ပါလျှင်အိုရောက်ရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။ စစ်မှန်သောအသက်တာ၌ဖြစ်ပျက်သောအဘယ်သူမျှမတဦးတည်းအလျှင်းငါ horny ခဲ့ရင်တောင်ငါ့အဘို့ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ arousal ဖြစ်ပေါ်ခြင်းနှင့်လိင်အဘို့အ gagging ။ သင်တန်းဒီတော့တနာတစ်ဦးနှင့်အတူအိုမဖြစ်နိုင်ပါဖြစ်ခဲ့သည်။
နေ့ 20 + arousal ကိစ္စရပ်များကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်လာရန်စတင်
နေ့ 40 + လိင်နှင့်ထိတွေ့ခံစားရရန်စတင် အလွန် ပိုပြီးပျြောမှေ့စ
Day 47; ပါးစပ်ဖြင့်လိင်ဆက်ဆံခြင်းမှပထမဆုံးအကြိမ် O ကို - ဖြောင့်မတ်စွာထိုင်ခြင်း - မျက်နှာ - အနေအထားတွင် (ထိန်းချုပ်ထားရန်လိုအပ်မှုရှိနေဆဲဖြစ်သည်) - ထိုအချိန်ကတည်းကထိုအရာများ ဆက်လက်၍ ရှိနေခဲ့သည်။
clitorally တစ်ဦးတည်းထိတွေ့ကနေပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အကူးယဉျမပါဘဲ MO ကိုနိုင်မယ့် relapse အဆင့်စဉ်အတွင်းနေ့ 70 + ။ ထိုအမဟုတ်ဘဲပြင်းထန်သောတိုက်ရွေ့လျားမှုထက် massaging နှင့်နူးညံ့သိမ်မွေ့ထိတွေ့ရာမှအိုနိုင်ကြ။
လိင် simulating ပထမဦးဆုံးအကြိမ်မိန်းမအင်္ဂါကိုတိုက်ရိုက် clit stim မပါဘဲ MO ကိုပေးနိုင်သည်အခြား relapse အဆင့်စဉ်အတွင်းနေ့ 200 + ။ စှာ လိင်ဆက်ဆံစဉ်ကာလအတွင်းချောဆီအရည်ပျော်လာခြင်း - တခါတရံ gushy level အထိဖြစ်သည်
နေ့ 246 (မနေ့က!); ငါအိပ်နေစဉ်ပါးစပ်ကနေလိင်ကိစ္စမှာပထမဆုံး O ဖြစ်တယ်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့ဒီဟာကကျွန်တော်ဘဝမှာပထမဆုံးသောအော်ဂဇင်တစ်ခုပါဘဲ၊ မဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းမှုမရှိခဲ့လို့လှုပ်ရှားမှုကိုမထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒါကြောင့်နည်းပညာပိုင်းအရ၊ ငါ့ဘဝမှာပထမဆုံးအကြိမ်ငါ့ကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကငါ့ကိုအော်ဂဇင်ကိုခေါ်ဆောင်သွားစဉ်အနားယူပြီးအနားယူနိုင်ခဲ့တယ်၊
ငါ 'ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်' အထက်တွင်ဖော်ပြထားသောနေရာတွင်ကျွန်ုပ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။
ဒါကြောင့်ဒီအချက်ကိုရဖို့ကျွန်တော့်ကို ၈ လကြာတယ်။ ကျွန်ုပ်သည်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမပြုမီကလေ့ကျင့်ခဲ့သည့် PIV လိင်ဆက်ဆံမှုမှကျွန်ုပ်သည်အိုမတတ်နိူင်သေးပါ။ သို့သော်ဤအရာကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ပါကကျွန်ုပ်သည်ယောနိကို MO ရနိုင်သည့်အတွက်ဖြစ်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်ယုံကြည်ပါသည်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းရည်သည် (ယခင်ကမရှိခဲ့သည့်အချိန်၊ ကျွန်ုပ်သည် PMO'ing နှင့် MO'ing ၏စိတ်ကူးယဉ်ဆန်သောစိတ်ကူးစိတ်သန်းများမဟုတ်ပါ။ ) ၎င်းကိုအမှန်တကယ်လိင်သို့ကူးပြောင်းရန်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရဖြစ်သည်။ ထွက်သွားပြီ
ထူးဆန်းသည်မှာကျွန်ုပ်၏ MO'ing သည်ကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်၊ မိတ်ဖက်များနှင့်ကျွန်ုပ်၏ရင်းနှီးမှုအတွက်စွမ်းရည်ကိုဘယ်သောအခါမျှလျှော့ချနိုင်ခြင်းမရှိပါ။ ငါသည်ငါ့ MO ကိုစွဲတစ်လျှောက်လုံးအလွန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။ ငါရုံနောက်တဖန်စနစ်တကျအလုပ်မလုပ်ဘူး နှင့်အလွန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး အဖြစ်, ဒီငါ့အဘို့အလွန်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
မှတ်သားသင့်သည်မှာသေခြင်းချုပ်ခြင်း၊ PIED နှင့် DE အားလုံးသည်ယောက်ျားအတွက်အလွန်သိသာသည်၊ အပြင်ဘက်ရှိလိင်အင်္ဂါများနှင့်အလွန်ထင်ရှားသည်။ ဒါပေမယ့်သပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့အတွင်းကျကျနေတဲ့မိန်းမအတွက်တော့မင်းမပြောနိုင်ပါဘူး။ အချိန်ကြာမြင့်စွာပြaနာရှိနေတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့မသိပါဘူး၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုမမြင်နိုင်လို့ပါ။ ထိုအခါယောက်ျားသည် လိုအပ်ချက်များ ကာယပိုင်းကိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှိုးဆွရန်အမျိုးသမီးတစ် ဦး သည်ထိုသို့မပြုပါ။ ငါဝမ်းဗိုက်ခံစားတာကိုနှစ်သက်တယ်၊ ဒါပေမယ့် ၁၄ နှစ်လောက်နေခဲ့ရတယ်၊ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ကမတုံ့ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သာအမျိုးသားတစ် ဦး ဖြစ်ခဲ့လျှင်၊ ၁၄ နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်၏အလုပ်များသည်စနစ်တကျရပ်တန့်သွားသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်ဤအရာကိုဖြေရှင်းရန်သေချာသည်။ အခုကျွန်တော်အသက် ၃၀ ကျော်လာပြီ၊ ကျွန်တော့်အသက် ၂၀ ကျော်တစ်လျှောက်လုံးမှာ MO စွဲလမ်းမှုတွေနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာတုံ့ပြန်မှုနဲ့အတူနေခဲ့ရသည်။ ပြtheနာအမှန်တကယ်ဖြစ်ခဲ့တာကိုလုံးဝမသိဘဲဖြစ်နေသည်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်, ငါ့အကြံပေးချက်ကိုဒီဖြစ်ပါတယ်။ ညစ်ညမ်းသောသို့မဟုတ်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းသည်လိင်ဆိုင်ရာသင်၏ဆန္ဒ၊ အခြားသူတစ် ဦး အပေါ်သင်၏တုန့်ပြန်မှု၊ သင်၏လိင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်မှုသို့မဟုတ်အော်ဂဇင်စွမ်းရည်အပေါ်အကျိုးသက်ရောက်စေပါကယခုစတင်လုပ်ဆောင်ရန်အချိန်ပင်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အချိန်များစွာကြာမြင့်နိုင်ပြီး၊ အချိန်ကြာမြင့်စွာကြာမြင့်နိုင်ပြီး၊ asstination သည်တစ်ခါတစ်ရံမခံနိုင်လောက်အောင်ဖြစ်တတ်ပြီးသင်သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြန်ဖြစ်လာလိမ့်မည်။ တစ်ခါတလေသင်ဟာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးလို့ခံစားရသလိုမျိုးအလုပ်မရှိဘူးလို့ခံစားရလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် လိမ့်မည် အလုပ်လုပ်ပါ အကယ်၍ သင်ကြိုးစားပြီးသည်နှင့်သင်ဖုန်မှုန်ပြီးသင်လဲကျပြီးနောက်ပြန်ပေါ်လာလျှင်ဖြည်းဖြည်းသော်လည်းသေချာသည်မှာသင်၏စိတ်သည်နောက်ခံတွင်ပြန်လည်ချိတ်ဆက်နေပါလိမ့်မည်၊ သင်၏ sensitivity နှင့်တုန့်ပြန်မှုသည်ပြန်လည်စတင်လိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်တော့ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်းသည်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ကျွန်ုပ်နှင့်ကစားရန်တစ်ယောက်ယောက်မရှိလျှင်၊ ကျွန်ုပ်၏ပြသနာများကိုသတိပြုမိပြီးကျွန်ုပ်ကိုစိတ်ရှည်သည်းခံ။ ကျွန်ုပ်အားထပ်မံလေ့လာသင်ယူရန်ဆန္ဒရှိသူမည်သူမဆိုကျွန်ုပ်မလုပ်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်၏လိင်စိတ်သည်အလွန်မြင့်မားလွန်းသည် လိင်မပါဘဲ။
ပြန်လည်ထူထောင်ရေး PA လို့ခေါ်တဲ့ကျွန်တော့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ကကျွန်တော့်ကိုအပတ်စဉ်လများစွာနှုတ်ခွန်းဆက်စကားပေးခဲ့တယ်။ အဲဒါကမှအော်ဂဇင်မရှိတော့ဘူးဆိုတာကောင်းကောင်းသဘောပေါက်ပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လုပ်ချင်စိတ်ရှိတယ်၊ ငါ့စိတ်ကိုပြန်လည်လေ့လာသင်ယူသည်။ ဒီလိုမျိုးကစားခြင်းနှင့်နားလည်မှုမျိုးလိုအပ်ပါတယ်။
ရက်ပေါင်း ၉၀ မှာလည်းသိပ်ပြီးမတွဲမိပါစေနဲ့။ ငါဘယ်တော့မှညစ်ညမ်းတဲ့စွဲလမ်းမှုစွဲလမ်းမှုမရှိခဲ့ဘူး၊ ငါနေတဲ့နေရာကိုရောက်ဖို့ငါ့ကိုဒီထက်ပိုပြီးကြာကြာယူထားချင်တယ်။ ၎င်းကိုဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောဘဝလမ်းစဉ်တစ်ခုအဖြစ်၎င်းကိုစိတ်ရှည်စွာထားပါ
ငါ၏အ PIV အော်ဂဇင်ပြန်ရောက်ပြီဟုပြောရန်ငါတစ်ချိန်ချိန်ပြန်လာလိမ့်မယ်မျှော်လင့်ပါတယ်ဒါပေမယ့်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေငါဆက်ပြောနေလိမ့်မည်။ အိပ်ခြင်းနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကိုရရှိခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏မျက်နှာတွင်အိုသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
LINK - အမျိုးသမီး - အမျိုးသားများနှင့်အတူအော်ဂဇင်မပြုလုပ်နိုင်၊ တစ် ဦး တည်းသာအောင်မြင်မှုဇာတ်လမ်း။